Ch 6 Luke – 2kalluunka
Home / Kitaabka Quduuska ah / Injiilka Luukos / Ch 6 Luke
6:1 Wakhtigaas waxaa dhacay in, Sabtida labaad marka hore, sida uu berrin hadhuudhka maray, xertiisii ​​ayaa kala sabuul hadhuudh oo iyaga cunaya, iyaga oo intay gacmahooda ku xoqeen.
6:2 Markaasaa Farrisiintii qaarkood wuxuu iyagii ku yidhi, "Maxaad u samaynaysaan wixii aan xalaal ahayn Sabtiyada?"
6:3 Iyo wax ka qabashada iyaga, Ciise wuxuu ku yidhi: "Ma aan akhriyi this, wixii Daa'uud sameeyey goortuu gaajooday, isaga iyo kuwii la jiray?
6:4 Sidee oo wuxuu galay gurigii Ilaah u galay, oo qaaday kibistii tusniinta, iyo cunay, oo wuxuu siiyey kuwii la jiray, In kastoo aan xalaal ahayn in la cuno, wadaaddada keliya maahee?"
6:5 Oo isna wuxuu ku yidhi iyagii, "Waayo, Wiilka Aadanahu waa sayidka, xitaa sabtida. "
6:6 Oo waxaa dhacday in, sabti kale, wuxuu galay sunagogga, oo wuxuu baray. Oo halkaasna waxaa joogay nin aad u, oo uu gacantiisa midigeed engegnayd.
6:7 Markaasaa culimmadii iyo Farrisiintii arkay in uu sabtida wax bogsiinayo iyo ka, si suganaaday waxay heli ashtakeeyaan isaga ka gees ah.
6:8 Oo weliba sida runta ah, wuxuu gartay fikirradoodii, oo sidaas daraaddeed ayuu ninkii gacanta engegnaa ku yidhi, "Kac oo dhexda isa soo." Oo anigoo, wuxuu joogsaday.
6:9 Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi: "Waxaan aad weydiiso haddii ay tahay xalaal Sabtiyada in wanaag la falo, ama shar? Si loo siiyo caafimaad si ay nolol, ama in la dilo?"
6:10 Oo intaan wax fiirinayay mariyey qof walba, wuxuu ninkii ku yidhi, "Gacantaada Kordhin." Oo isna wuxuu u kordhiyay. Iyo gacantiisuna waa bogsatay.
6:11 Markaasaa waxaa iyaga ka buuxsamay waalli, oo waxay ka wada hadleen la mid kale, waa maxay, gaar ahaan, waxay ku sameeyaan wax Ciise ku saabsan.
6:12 Oo waxaa dhacday in, waayahaas, ayuu u baxay inuu buurta inuu ku tukado,. Isaguna wuxuu joogay xaggii Ilaah u tukado habeenkii oo dhan.
6:13 Oo markay maalin cad ay soo gaareen, ayuu xertiisii ​​u yeedhay. Oo isna wuxuu u doortay laba iyo toban iyaga ka (sidoo kale kii uu u bixiyey rasuullo):
6:14 Simon, la odhan jiray, kii uu Peter, iyo walaalkiis Andaros, Yacquub iyo Yooxanaa, Filibos iyo Bartolomayos,
6:15 Matayos iyo Toomas, James Alfayos, iyo Simoon oo la odhan jiray Qiiroleh,,
6:16 Anigoo Yuudas ah oo ah James, iyo Yuudas Iskariyod, kuwaas oo ahaa kastoo Khayaamo Badan.
6:17 Oo ku soo degaya oo iyaga la jira, wuxuu meel bannaan ayuu istaagay oo dad badan oo xertiisa ah, oo dad faro badan, mudda ah dadka oo dhan oo Yahuudiya iyo Yeruusaalem iyo seacoast ah, oo dhinacyada Turos iyo Siidoon,
6:18 kuwaas oo u yimid si ay u dhagaystaan ​​laga yaabaa in isaga iyo cudurradooda laga bogsiiyo ay. Oo kuwa la dhibtoonaya jinni oo nijaas ah waa la bogsiiyey.
6:19 Dadkii badnaa oo dhan waxaa lagu doonayeen inay taabtaan isaga, waayo, xoog u baxay inuu isaga ka oo wada bogsiiyey.
6:20 Oo weliba intuu indhihiisii ​​kor u xertiisii, ayuu yiri: "Waxaa barakaysan kuwiinna masaakiinta ah, idinkaa iska leh, waayo, boqortooyada Ilaah.
6:21 Waad ku barakaysan tahay, kuwaas oo hadda waa gaajaysan, waayo, waad dhergi doonaan. Waxaa barakaysan kuwiinna haddeer ooyaya oo, waayo, waad qosli doontaan.
6:22 Waad barakaysnaan doontaan markaad nin oo aad u nebcaan doonaan, iyo marka ay idin kala soocay doonaa oo aad cayday, oo magacaaga tuuraa sida haddii xun, sababta oo ah Wiilka Aadamow.
6:23 Farxa maalintaas oo aad u faraxno. Waayo, bal eeg, abaalgudkiinnu waa ku weyn yahay jannada. Waayo, kuwaas oo isla wixii ay awowayaashood u xajiyeen nebiyada.
6:24 Oo weliba sida runta ah, Hoog waxaa leh kuwiinna hodanka ah waa, waayo, haatan waxaad hesheen.
6:25 Hoogna waxaa leh kuwiinna ku qanacsanayn, waayo, waad gaajoon doontaan;. Hoogna waxaa leh kuwiinna haddeer qoslaya, waayo, waad barooran doontaan oo ooyi.
6:26 Waa idiin hoog markii dadka oo ay kugu barakoobi doonaan. Waayo, kuwaas oo isla wixii ay awowayaashood u xajiyeen nebiyadii beenta ahaa.
6:36 Sidaa darteed, be merciful, just as your Father is also merciful.
6:38 Give, and it will be given to you: a good measure, pressed down and shaken together and overflowing, they will place upon your lap. Dhab, the same measure that you use to measure out, will be used to measure back to you again.”
6:39 Haddaba isagu wuxuu iyagii u sheegay barbardhigo kale: "Sidee indha la keeni kara Indhoolaha? Ma rabtaa Labadoodu miyaanay god ku dhacdo?
6:40 Qof xer ah macallinkiisa kama kor ku xusan. Laakiin mid kasta moyee doonaa, haddii uu yahay sida macallinkiisa oo kale.
6:41 Maxaad leedihiin ood arki kale caws buu ku jirta isha walaalkaa, halka log ku jirta ishaada, aadan ka fiirsan?
6:42 Ama sidee baad u odhan kartaa inaad walaalkaa, 'Brother, ii oggolow inaan caws ka ishaada saar,'Aad halka adiga oo aan arkaynin dogobka ishaada ku jirase aad? Labawejiile yahow, marka hore ka ishaada ku jira iska saar logga, ka dibna waxa aad si cad u arki doonaa, si aad u horseedi kartaa oo kale caws buu ka soo isha walaalkaa.
6:43 Waayo, ma jiro geed wanaagsan oo midho xun yahay, welibana ma jiro geed xun oo midho wanaagsan dhalaa.
6:44 Maxaa yeelay, geed kasta oo kasta waxaa laga garanayaa midhihiisa. Waayo, iyagu ma berde qodxan, mana ay soo urursan, ka geedka guro.
6:45 Ninka wanaagsan, ka baxay guryihii wax wanaagsan oo qalbiga ku, waxay bixisaa waxa wanaagsan. Oo nin xun, ka baxay guryihii wax xun, waxay bixisaa waxa sharka ah. Waayo, waxaa qalbiga ku badan ee, afku wuxuu ku hadlaa.
6:46 Laakiin maxaad ii soo wac, Sayidow, Sayidow,,'Iyo weydaan wixii aan leeyahay sameeyo?
6:47 Qof kasta oo ii yimaada,, iyo maqlaa erayadayda, oo yeela: Waxaan kuugu muuqan waxa uu u eg yahay.
6:48 Wuxuu u eg yahay nin guri dhisay, ayaa qoday oo uu dhagax weyn ka dul aasaaskii ku dhigay. Markaasuu, marka kadigay ku yimid, webiga waxaa lagu deg degi gurigaas, oo ma uu karin inuu u dhaqaaqo. Waayo, waxaa laga dul dhisay dhagaxa.
6:49 Laakiin ku alla kii maqla oo aan samayn: wuxuu u eg yahay nin ku dul carrada dhismaha uu guriga, aan aasaas lahayn. Webiga loola cararay ka soo hor jeedda, iyo waxa ugu dhakhsaha badan hoos u dhacay, oo dumiddii gurigaasu waa weynayd. "